Torohevitra hanoritana ny vatan'olombelona | Famoronana an-tserasera
Torohevitra hanoritana ny vatan'olombelona
Ny iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra amin'ny fahitako azy dia sariho ny vatan'olombelona, ny fitantanana aloha ny fakana ny antsipiriany rehetra avy eo ary apetaho amin'ny taratasy araka izay azo atao, dia fanamby izay tsy maharesy im-betsaka.
Soa ihany fa tsy very ny rehetra, aza kivy satria misy fomba, teknika, fika ary torohevitra mety ho tena ilaina izany rehefa misarika vatan'olombelona. Tsy handratra ny hanomboka, amin'ny fikarohana ny sasany amin'ireo anatomia vatana, satria arakaraka ny antsipiriany fantatsika momba azy io, dia tsy ho sarotra ny manao sary azy io, ny zavatra tsara indrindra dia ny mahita fampahalalana marobe amin'ny Internet sy amin'ny boky ianao.
1 Inona no tokony ho fantatrao mba hisarihana vatan'olombelona?
2 Ahoana ny fomba hahatratrarana ny halaliny sy ny fivezivezena amin'ny sary
Inona no tokony ho fantatrao mba hisarihana vatan'olombelona?
Hanome fampahalalana vitsivitsy izahay, ho famenony ary ho fanampiana indrindra ho an'ireo izay manomboka amin'ny tontolon'ny sary ny vatan'olombelona.
Zava-dehibe ny fahalalana ny tsirairay amin'ireo faritra mandrafitra azy io, manadihady inona ireo taolana sy hozatra malaza indrindra sy manan-danja ary / na ireo izay miavaka amin'ny fahitana azy voalohany, dia afaka mahita izany fampahalalana izany ianao amin'ny lahatsoratra momba ny anatomia.
Fantaro ny fahasamihafana misy eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy, izay fandrefesana mahazatra dia tantely anatomika amin'ireto tranga ireto, izay manana ny tongony lava indrindra na ny tànany lehibe indrindra, ny refy eo anelanelan'ny ampahany amin'ny vatana amin'ny lahy na vavy samy hafa, sns. amin'ny tranga rehetra dia mitovy izy io, misy ny tsy fitoviana.
Manaova fahazarana manomboka tsipika fototra araka ny ampianarina amin'ny sekoly fanaovana sary (faribolana, boribory, sns.) ary aorian'ny fananana ny vatany feno dia manomboka manome antsipiriany amin'ny antsipirian'ny faritra tsirairay amin'ny vatana izy ireo manampy endrika hafa
Ny fandinihana amin'ny an-tsipiriany ireo olona manodidina anay dia hanome anao fomba fijery samihafa momba ny fomba mety tsy hitovizan'ny anatoman'ny vatana miankina amin'ny taonanao, firaisana, asa, raha manify ianao na matavy, inona amin'ireo faritra amin'ny vatana no misongadina kokoa amin'ny firaisana iray ary amin'ny iray hafa, inona avy ireo endrika mampiavaka sy mahazatra ny lahy sy ny vavy sy ny olon-kafa.
Zava-dehibe ny toe-javatra tsirairay sy ny endrika azonao jerena, ny jiro mifandray amin'ny vatana ve, ahoana no fiovan'ny fomba fijery? Raha ny mifanohitra amin'izay no misy fisian'ny alokaInona no fiantraikany amin'ny fahitana ara-pahitana, inona no manampy na manaisotra azy? Raiso an-tsoratra izany rehetra izany na tsara kokoa, apetraho amin'ny taratasy indray mandeha.
Atombohy manomboka ny taolam-paty ny sarinao, safidio ny toerana, manaova fanazaran-tena miaraka amin'ny maromaro ary mandehana mandavorary ny asanao; Rehefa mahatsiaro ho afa-po ianao dia tohizo ny fanampiana ny hozatra mandra-pahatonganao amin'ny sary araka ny itiavanao azy.
Tsy maintsy manaova fanazaran-tena betsaka, manaova sary tsy mijanona mba handavorary ny antsipiriany tsirairay amin'ny vatan'olombelona.
Raha vantany vao tsapanao fa efa domainanao ny manoritra sary, dingana hafa iray no ahitanao izany azonao atao ny manampy singa manitatra ny tarehimarika tamin'ny voalohany, dia afaka manome anao toetra manokana sy mampiavaka azy ireo manokana.
Ahoana ny fomba hahatratrarana ny halaliny sy ny fivezivezena amin'ny sary
Raha vao resy ny dingana voalohany dia misy sakana vaovao toa resena, toy ny Omeo fahatsapana ny halaliny sy ny fivezivezena amin'ny sary nataonao. Mialoha anao dia lazaiko aminao fa ilaina ny fampiharana sy ny faharetana hanatanterahana izany.
Manokana ny tenanao aminny jereo ny fihetsiky ny olombelona, antsipiriany ny fomba fandehanana, raha amin'ny alàlan'ny dingana lava na fohy, raha mihazakazaka izy, ny fomba fivezivezeny ny tanany, ny tongony, ny fifandraisan'ny hozatra ary rehefa entinao any amin'ny taratasy izy, dia miezaha haneho ny tena mampatahotra ny hita hahatratra ny vokatra andrasana.
Jereo ny olona avy zoro manome anao fomba fijery, toy ny avy any ambony, ohatra, jereo ny fijery ny ampahany sasany lehibe kokoa noho ny hafa, ny mazàna milalao hazavana sy aloka, dia tena hanampy izany.
Mampiasà sary ho referansa manaova sary kely kokoa sy sarotra kokoa ary manadihady amin'ny lahatsoratra momba ny fanaovana sary izy, amin'ny Internet dia mandinika sary sy antsipiriany misongadina, izay faritra toa lehibe kokoa na kely arakaraka ny zoro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Torohevitra hanoritana ny vatan'olombelona
ity torolàlana ity miaraka amin'ny fizarana ny faritra tsirairay amin'ny vatan'olombelona dia tena tsara, satria ny loha mafy toa ahy dia mampiseho an-tsary ilay protokol izay tsy maintsy arahana hisarihana vatana ... Manantena aho fa hampihatra azy io amin'ny fotoana rehetra, ary handresy ny hakamoana mahatoky izay manjaka araka ny sitra-poko ... MARO, FA MBOLA MISAOTRA MISAOTRA ANAO ...
Fandaharana an-tsary, fandokoana ary fanaovana sary amin'ny dizitaly